सेल्फी माउस: तपाईंको व्यवसाय वा घटनाको लागि सेल्फी फोटो प्रोप प्राप्त गर्नुहोस् Martech Zone
सेल्फी माउस: तपाईंको व्यवसाय वा घटनाको लागि एक सेल्फी फोटो प्रोप प्राप्त गर्नुहोस्
सोमबार, अप्रिल 10, 2017 Douglas Karr
मेरो राम्रो मित्र, ग्रेग क्रस, एक नयाँ कम्पनी र उत्पादन शुरू गर्न विचार मिल्यो। उनले टोलीका सदस्यहरू बेन क्रस र जेसी स्टिललाई भेला गरे, ड्राई-इरेज मार्कर समातेर सम्भव ब्रान्डको नाम सेतो बोर्डि started गर्न थाले। हामी सबै चिच्याउन मन पराउछौं, चीज भन्नुहोस्! मिच सेल्फी माउसको जन्म भएको थियो।
एक डिजाइनमा पठाउनुहोस्, मकअप अनुमोदन गर्नुहोस्, र तपाईं आफ्नो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सेल्फी माउस नि: शुल्क शिपिंगको साथ $ 60 को लागि।
अब तपाईंको ग्राहकहरू वा सहभागीहरूले एक उत्कृष्ट सेल्फी प्राप्त गर्न सक्दछन् जसले तपाईंको ब्रान्डलाई टिकाऊ फोटो प्रोपको साथ प्रचार गर्दछ। यो रमाईलो छ, यो प्रयोग गर्न सजिलो हुन सक्दैन, र यसले इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, पिन्टेरेस्ट वा कुनै अन्य फोटो साझेदारी सामाजिक मिडिया नेटवर्क मार्फत एक टन एक्सपोजर प्रदान गर्न सक्दछ। जाँच गर्नुहोस् सेल्फी माउसको इन्स्टाग्राम सबै महान तरिकाहरू हेर्नको लागि उनीहरूका ग्राहकहरूले उनीहरूको सेल्फी माउस प्रयोग गरिरहेका छन्!
टैग: ग्रेग क्रसमाउस मिच गर्नुहोस्फोटो समर्थनSelfieसेल्फी माउस
प्रारम्भिक वसन्त मार्केटिंग प्रयासबाट ई-वाणिज्य टेकवेज
प्रकार, संसाधन, र विज्ञापन फ्रड डिटेक्शनको लागि समाधान